Fokonolona nikomy Olona 3 nogadraina ao Ambatondrazaka
Telo mirahalahy, anisan’ny mpitarika vahoaka nikomy tao amin’ny fokontany Ambohibe, kaominina Didy, distrikan’Ambatondrazaka, faritra Alaotra Mangoro no naiditra am-ponja ary migadra mandritry ny efa-taona.
Roavavy niray tsikombakomba tamin’izy ireo koa nahazo sazy mihantona dimy taona. Araka ny fanazavana voaray avy amin’ny ben’ny tanànan’i Didy, Radoka Davidson, dia nilaza tamina mpandraharaha sy mpanao asa soa ao amin’ity kaominina ity, ireto andian’olona ireto nilaza fa nangalatra ny taniny, ny tanimbary, ny tanim-pasany ary niray petsapetsa tamin’io mpanao asa soa io, ny ben’ny tanàna. Rehefa nidina tany an-toerana nanamarina izany ny Prefe dia tsy nisy ny halatra na dia iray aza fa fanosoram-potaka no natao tamin’io mpandraharaha io sy ny ben’ny tanàna. Fanaovana asa soa, fananganana trano sekoly, fanamboarana ny lalana hampiasain’ny mponina, fametrahana fotodrafitrasa maro aza no nisy tao amin’ity kaominina Didy ity fa tsy fangalarana tany velively, araka ny feo naely. Ireo telo lahy voalaza etsy ambony, dia nikononkonona fikomiana ary nitarika vahoaka nidina an-dalambe sy nilanja sorabaventy noho io filazana halatra tany io. Rehefa nandre izany ny kaomandin’ny zandary dia nandefa zandary roalahy iraka, hampiantso ireo mpitarika ny fikomiana. Nivadika ny rasa ary nolazain’izy ireo fa misy zandary hisambotra azy ireo, hono, ka mila mivory haingana ny vahoaka. Fampiantsoana no nataon’ireo iraka fa tsy hisambotra, hoy ny fanazavany. Izy ireo indray no voatoraka vato ka naratra. Voatery nanapoaka basy ireo zandary, ka niparitaka ny fokonolona tao Ambohibe. Ireto fokonolona izay novoriana ireto dia nolazaina sy nofitahana fa handoro ny fananan’io mpandraharaha io. Marihana fa olona niara-niasa tamin’ny ben’ny tanàna akaiky sy nifampihinana ny manta sy ny masaka tamin’io mpandraharaha io ireo olona nitarika fikomiana sy korontana ireo. Voalaza koa fa nisy ny fihaonan’ireto mpitarika fikomiana ireto tamin’ny mpanao gazety teto Antananarivo ary nilaza izy ireo, fa olona 7 arivo ao Ambohibe no very fananana amin’izay fangalana ny taniny izay, nefa rehefa nohamarinin’ny Bianco, ny Prefe, ny zandary, ny Ben’ny tanàna, ary ireo tompon’andraikitra isan-tsokanjiny tao Ambatondrazaka izany, dia tsy nisy velively ny halatra tany, fa fanaratsiana sy fanosoram-potaka aza no natao tamin’io mpandraharaha sy mpanao asa soa ary ny Ben’ny tanànan’i Didy io, hoy hatrany ny fanazavana azo.